सभासद् सिंहले किन भेटे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ? | abc.com.np
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार सभासद् सिंह सामान्य नागरिक भएको हैसियतले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरेको भए कुनै समस्या हुने थिएन् । उनी सभासद् भएकोले भेट गर्न जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिनु पथ्र्यो । यो भेट कूटनीतिक मर्यादा विपरित हो । सभासद् सिंहले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरेको विषयमा एक जना नेपाली काँग्रेसकै सभासद् भन्छन्,‘सिंहले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरी कुराकानी गरेको फोटो समेत खिचाएर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । यो उनको हर्कत राम्रो होइन् । उनको हर्कतले राजनीतिक दलहरुको नेताहरुमाझ मनोवैज्ञानिक त्रास फैलिन्छ ।’
स्रोतका अनुसार सिंहले मोदीलाई भेट गर्न जान आधिकारिक रुपमा पार्टीलाई समेत जानकारी दिएका छैनन् । निर्वाचित सभासद्ले परराष्ट्र मन्त्रालय र पार्टीलाई समेत जानकारी नदिई खुलम्खुला भेट्न मिल्छ ? उनी भारतीय नागरिक हुन् वा नेपाली ? उनले कुन उदेश्यले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट गरे ? सरकारको चारैवटा सुरक्षा अंगहरुले सिंहमाथि अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएको छ । मोदीलाई भेट गर्न भारत गएको सम्वन्धमा सिंहले पार्टीलाई जानकारी दिनु पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले जानकारी गराईराख्न आवश्यक नरहेको बताए । मन्त्री रिजालले परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गराउनु या अनुमति लिनु पथ्र्यो कि पर्दैन्थ्यो भन्ने बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको समेत बताए । सिंहले भेट गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी असारको तेस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । ‘रअ’ निकट मानिएको भनिएका सिंह र मोदीबीचको भेटपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण मिति तय हुनुलाई रहस्यमय मानिएको छ । यद्यपी कुनै पनि मुुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि छिमेकी मुलुकको भ्रमण गरेपछि सम्वन्ध झन प्रगाड हुनेमा दुई मत छैन् ।
तर, सभासद् सिंहले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन विशेष भूमिका त खेलिरहेका छैनन् ? प्रश्न उठेको छ । मसालका एक नेता र राजतन्त्रको भजन गाउँदै आएको पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले समेत नेपालमा पुन:राजतन्त्र फर्किने किटानी गरिरहेका बेला सिंहको मोदीसँगको भेट र नेपाल भ्रमण मिति तय हुनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न् । सभासद् सिंहले नेपालमा कुन प्रहरीलाई बढुवा गर्ने ? कसलाई कुन ठाउँमा सरुवा गर्ने ? अख्तियारबाट कसलाई कारवाही गराउने र नगराउने भन्ने विषयमा समेत चासो दिने गरेका छन् । सिंह नेपाल प्रहरीको डीआईजी बढुवा प्रकरणमा व्रिफकेश दिनेलाई बढुवा गराउने खेलमा समेत सामेल थिए ।